Iprofayile yenkampani - iFujian Bridge Style Furnishings Co., Ltd.
Isitayile seFujian Bridge Furnishings Co, Ltd. yi-e-yorhwebo egxile kwi-BAMBOO kunye ne-WOOD yomthengi weemveliso zabathengi ngeemveliso zeBhodi yoCucu ye-Bamboo kunye neenkuni, i-Bamboo Drawer Organiser, iBhodi ye-Bamboo Charcuterie Cheese njl. EMntla Melika naseYurophu. Emva kweminyaka elishumi yophuhliso, umzi mveliso ophethwe ngokupheleleyo ubandakanya iimitha zesikwere ezili-15000 kwaye uqinisekisiwe nge-BSCI, FSC, ISO9001.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkonzo egqwesileyo yenza ukuba iFujian Bridge Style Furnishings Co., Ltd. isebenze ngaphezulu kwe-1000 yabathengisi beAmazon kunye nokugcina intsebenziswano yexesha elide nenenzuzo.
Ukuqhubeka kophuhliso kunye nokuyila, iFujian Bridge Style Furnishings Co., Ltd. iye yaba ngumthengisi owaziwayo nothembekileyo kwimveliso yoqalo kunye nemithi e China.
Kule minyaka ili-10 idlulileyo, inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nenkonzo ebalaseleyo yenza ukuba iFujian Bridge Style Furnishing Co, Ltd isebenze ngaphezulu kwe-1000 yabathengisi beAmazon kunye nokugcina intsebenziswano yexesha elide kunye nenenzuzo.
Ngo-2016Hong Kong Exhibition
Ngo-2017Hong Kong Exhibition
Hong Kong Umboniso